Zvinyorwa zvezvirimwa, mapeji akapatsanurwa, wedzera watermark nePDF Plus | Ndinobva mac
Zvinyorwa zvezvirimwa, mapeji akapatsanurwa, wedzera watermark nePDF Plus
Kana zvasvika pakurongedza zvinyorwa muPDF fomati, imwe yeakanakisa maficha atinogona kuwana parizvino pamushandi wePDF Nyanzvi, chishandiso chakazara chinotibvumidza kuita chero basa ripi neripi rinouya mupfungwa. Mutengo wePDF Nyanzvi ingangoita makumi matanhatu euros, asi dzimwe nguva tinogona kuiwana ine chakakosha mutengo. Asi kune avo vashandisi vasingade kubhadhara iyo mari uye avo zvavanoda hazvivhare zvese zvingasarudzwa nePDF Expert, muMac App Store tinogona kuwana PDF Plus, chikumbiro icho inotibvumidza isu kubata mabasa akajairika nerudzi urwu rwefaira.
Kutenda kuPDF Plus tinokwanisa kutora mapeji kubva mumagwaro, kushandura marongero emapeji aratidzwa pamwe nekuapatsanura kuita zvinyorwa zvakazvimirira. Tinogona zvakare kupatsanura gwaro muzvikamu zvemapeji, chengetedza iwo akatorwa mapeji akananga mumafolda ... Zviripachena, sekungotitendera kupatsanura zvinyorwa, zvinotibvumidzawo isa pamwechete magwaro akawanda muPDF fomati, chimwe chinhu chatinogona zvakare kuita neyekuzvarwa Preview application, asi ichitipa imwe shoma dzimwe sarudzo.
Imwe yesarudzo dzinonakidza idzo PDF Plus inotipa inogona kuwanikwa mu mukana wekuwedzera watermark, Kudzivirira chero munhu upi zvake kuti akwanise kupasa savo magwaro atakagadzira. PDF Plus inotibvumidza kungo wedzera mamaki mameseji, uko kwatingave nemhando dzakasiyana dzemafonti, opacity, mumvuri ... zvinosuwisa kuti hatigone kuwedzera chero chimiro chemhando se watermark.
PDF Plus ine mutengo wenguva dzose we4,99 euros paMac App Store, kunyangwe nguva nenguva, mushambadzi anoita kuti kurodha kuwanikwe kune vese vashandisi mahara. PDF Plus inoenderana ne macOS 10.10 kana gare gare uye inoda 64-bit processor, inongogara pamusoro pe3 MB uye iri muChirungu chete.
PDF Uyezve - Unganidza & Split maPDF5,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvinyorwa zvezvirimwa, mapeji akapatsanurwa, wedzera watermark nePDF Plus
TvOS uye watchOS beta 2 inowanikwawo kune vanogadzira